Wasiirka Gaashaandhiga Soomaaliya oo ka hadlay sida laga yeelayo Ciidamada ay Tababareen Imaaraadka | SAHAN ONLINE
MUQDISHO – Wasiirka Gaashaandhigga Soomaaliya Maxamed Mursal Sheekh Cabdiraxmaan ayaa ka hadlay sida laga yeelayo ciidamada ay tababareen Imaaraatka Carabta.
Maxamed Mursal Sheekh Cabdiraxmaan ayaa sheegay in ciidanka uu tababaray Imaaraatka carabta oo ku jira Dugsiga Tababarka ee Jen. Gordon ay la wareegi doonto dowladda Feseraalka Soomaaliya.
Waxa uu sheegay in ciidamada la tababaray ay yihiin ciidan ka tirsan Xoogga dalka Soomaaliya isla markaana ay mas’uul ka tahay dowladda Soomaaliya.
…..” Ciidamada ay tababareen Imaaraadka Carabta waa ciidan ka tirsan xoogga dalka, dowladda Soomaaliyeed ayaa la wareegi doontya, xil ayaa ka saaran, mushaaraadka la siin jiray waxay ahaayeen kuwo KMG ah, waxaa hada la diyaariyay qorshahooda iyo tirakoobkooda, wixii hada ka dambeeya dowladda ayaa mushaarka siin doonta”ayuu yiri Wasirika Gaashaandhigga.
Wasiirka Gaashaandhigga Soomaaliya Maxamed Mursal Sheekh Cabdiraxmaan ayaa sheegay in munaasabadda 12ka April oo ah maalinta ciidanka xoogga dalka oo ku beegan maalinta beri ah lagu shaacin doono in dowladda la wareegtay ayna dowladu kafaalo qaadi doonto.
….”Tirakoobkooda iyo namabaradooda waa la diyaariyay, waxaana loo sameeyay guutooyinka ururada ay ka mid noqonayaan”ayuu yiri Wasiirka gaashaandhigga oo u mahadceliyay Imaaraadka Carabta tababarka ay siiso Ciidamada…”ayuu yiri.
Tallaabadan ayaa ka dambeysay kaddib markii meeshii u xumeyd uu gaaray xiriirka Soomaaliya iyo Imaaraatka Carabta iyadoona Axadii lasoo dhaafay ciidanka amnigu ay garoonka Muqdisho ku qabteen lacag malaayiin dollar oo laga keenay Imaaraatka Carabta.
Wasaaradda Arrimaha dibadda ee Imaaraatka Carabta ayaa war ay soo saartay waxay ku sheegtay in ciidamada amniga ee Soomaaliya ay qoryo ku qabteen dadkii diyaarada saarnaa isla markaana ay kala wareegeen $9 milyan iyo 600 kun oo dollar.
Wasaaradda ayaa tallaabadaas ku tilmaantay mid sharci darro ah oo xadgudub ku ah shuruucda caalamka.